अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कं | गृहपृष्ठ
Home लगानी अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कं
अरुणभ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कं
स्थापना : सन् १९९७
अध्यक्ष : गुरुप्रसाद न्यौपाने
प्रबन्ध सञ्चालक : रमेश न्यौपाने
संस्थापक : ७० प्रतिशत
सर्वसाधारण : ३० प्रतिशत
स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको संलग्नतामा स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था र निजी उद्यमीहरूको सहकार्यबाट जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा यो कम्पनीको स्थापना भएको हो । पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापित यसले २०६६ असार ९ गते प्रतिशेयर रू. १ सय अङ्कित मूल्यमा रू. ८४ प्रिमियम थप गरी कुल ५ लाख ९४ हजार कित्ता साधारण शेयर रू. १ सय ८४ का दरले सर्वसाधारणलाई विक्री गरेको थियो । त्यसपछि २०६६ कात्तिक २० देखि यस कम्पनीका कुल १७ लाख १५ हजार कित्ता शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका छन् । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतको सङ्खुवासभा जिल्लामा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै लग्ने बताएको छ । आव ०६५/६६ मा शेयरधनीहरूलाई ४० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको यो कम्पनीले आव ०६६/६७ मा ३७ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, आव ०६७/६८ को नाफाका आधारमा यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव आगामी १४औं वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने निर्णयगरेको छ ।
यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यस कम्पनीको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । सन् २०१० को डिसेम्बरदेखि हालसम्मको कारोबारका आधारमा यो कम्पनीको शेयर दुईपटक ओभरसोल्ड जोनमा र एकपटक ओभरवट जोनमा देखिएको छ । त्यसअनुसार सबैभन्दा न्यून स्केल २४ र उच्च स्केल ७२ सम्म यस कम्पनीको आरएसआई रेखा पुगेको देखिन्छ । हाल यस कम्पनीको आरएसआई रेखा स्केल ४५ बाट ओरालो लागेर स्केल ४० तिर उन्मुख देखिएको छ । त्यसले यो कम्पनीको शेयरमूल्यमा थप ह्रास आउन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । शेयरमूल्यमा केही कमी आए पनि कम्पनीले दिने प्रतिफलका आधारमा लगानीकर्तालाई खासै नोक्सान हुने देखिँदैन । कम्पनीले वितरण गर्ने प्रतिफल पाउने समय भएकाले यो कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहनेहरूका लागि यो उपयुक्त समय हो भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय होल्ड गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
आव ०६७/६८ को चौथो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू.२६ करोड ५१ लाख रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता मूल्य अघिल्लो आवको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यो कम्पनीले रू. ३ करोड ९ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो नाफा अघिल्लो आवको भन्दा १४ दशमलव ८९ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको चुक्ता पूँजीको वृद्धिदरभन्दा मुनाफा करीब ४ प्रतिशत धेरैले बढेको छ । आव ०६७/६८ को मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी हो । कम्पनीको जगेडा कोष ५६ दशमलव ५३ प्रतिशतले कम भएर रू. ४ करोड ४ लाखमा सीमित भएकाले प्रतिफल घटेको हो । यसले विगतका वर्षरूको तुलनामा यो कम्पनीका वित्तीय परिसूचक केही कमजोर भएको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा कम्पनीले वितरण गर्ने प्रतिफलदरमा समेत असर पर्न सक्नेछ ।
शुरूमा धेरै लगानी लाग्ने र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले यस्ता कम्पनीको शेयर प्राय: कमै किनबेच हुने गरेको छ । त्यसैगरी यो वर्षलगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल गतवर्षभन्दा कम देखिएको छ । यसरी लगानीकर्ताहरूलाई दिने प्रतिफलदरमा देखिएको फरकले गर्दा बजारमा शेयरमूल्यमा सामान्य कमी आउने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा यो कम्पनीको शेयर नियमित रूपमा कारोबार हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि समस्या देखिँदैन । सन् २००८ नोभेम्बर २५ देखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा यो कम्पनीको शेयर कारोबार हुन थालेको हो । उक्त दिनको शुरू मूल्य रू. ७ सय ९० नै यसको हालसम्मको सबैभन्दा उच्च मूल्य हो । त्यसपछिका दिनहरूमा क्रमश: घट्दो अवस्थामा देखिएको यो कम्पनीको शेयर गत जुन १६ मा हालसम्मकै न्यून मूल्य रू. ३ सय ८ मा कारोबार भयो । लामो समयका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि यो कम्पनीको शेयर उपयुक्त नै देखिन्छ ।